အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: May 2009
ပြောင်ပြီးတော့ ညုန်းမ် (:=)
ကြီး ငယ် လတ်မရွှေး
(အားလုံးသိကြတဲ့ မမကွမ် ရဲ့တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့
ဘလောခ်လောကတခုလုံးကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ မိုးကဗျာ ပါ
တီကလဲ ဟိုတနေ့က မိုးတွေစွတ်ရွာနေတာနဲ့ အဲ့ဒီ ကဗျာ က ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာတယ်
အဲ့တာ နဲ့ ဆင်တူယိုးမှားဗာရှင်းနဲ့ တီခင်တဲ့သူတွေနဲ့ရေးပါတယ်
ပုံတွေကိုတော့ ဂူဂယ် လုပ်ပါတယ် )
Posted by တီချမ်း at 10:43 PM 17 comments: Links to this post
နန်းဆန်တဲ့ တူအရီး (သို့) ငပေါဂေဟာနှင့်အပြိုင်ပေါခြင်း
End of messages received while you were offline at 9:16 AM on Wednesday
myittaryongpyan: နိုင်ဂံဂျားပြန်တစ်ယောက်ရဲ့ ငြီးချင်း (Tag Post) http://myittaryongpyan.blogspot.com/
Addy: အာဘွား နင်းနင်း
Addy: ဟဲ့ ဟဲ့ စောစောစီးစီး ဘဇာဖြစ် ဆေးသောက်ခဲ့ဘူးလား
Addy: ဖြစ်ရမယ် ငါ့တူမ
Sent at 9:32 AM on Wednesday
Addy: တူမတော် ငှဲ့ အဒွေးတော်ဆီ အခစားမ၀င်ရသေးဘုနော့
myittaryongpyan: ယခုပင် မစိုင်းအခစားဝင်ရန် လျှောက်တင်ပါသည် ဘုရားးးးးးးးးးးးးးး
Addy: သင့်လှပေ၏တူမတော် သင့်လှပေ၏
တူမတော် ရဲ့မောင်တော် ကော ကျန်းမာလန်းဖြာ လျက်ရှိရဲ့ မှလားကွယ့်
myittaryongpyan: ကျေးဇူးကြီးမားလှကြောင်းပါ ဒွေတော်
Addy: ဒွေး ပါအေ့
Addy: အင့် နန်းဟန် ကိုမစောင့် ရှန်း တာကြောင့် ပျက်တဲ့ တူမတော် ဒွေးတော် ကယ်ချင်ပါ့ပေမယ့်လဲ ရှင်တော့ဘုရား က ဒီလိုအပြစ်မျိုး ကို သည်းခံခဲပေတယ့်ကွယ့်
ဒါကြောင့် တူမတော် ကို ငမိုက်သားများနဲ့ တောင်စွယ် နေကွယ်ရင်......................
myittaryongpyan: အောင်မယ်မင်းရယ်မှ ဖြစ်ရမယ်
Addy: ဒွေးတော် စကား ဆုံးပါစေအုံးလေ တူမတော် ညည်းချင်းက စ တော့ ပြောခက်ရ ရတက်ပွေပေမယ်
Sent at 9:36 AM on Wednesday
myittaryongpyan: ဒီနေ့ ချစ်တီနဲ့ နန်းဆန်ဆန်လေး ချက်မယ်။
Addy: တူမတော်ရဲ့ မောင်တော် ရှူရှ မင်း ပို့သတဲ့မေတ္တာကြောင့် ကျန်းမာ ပကတိ လန်းဖြာစွာရှိပေတယ် တူမတော်
Addy: တူမတော် သတိထားမှပေါ့ကွယ် ထီးဟန်မှောက် နန်းဟန်ပျောက်ရင်ဖြင့် ကုလားဖြူ ကျွန်သဘောက်တွေနဲ့ ဘယ်မှာ ခြားပါတော့မလဲကွယ့်သတိထားပါကွယ်
Addy: ဒွေးတော် တို့ နန်းရိုက်နန်းရာ ဆွေမျိူညာသဟာတွေ ဟာဖြင့် ထီးသုံးနန်းဟန် ကိုစောင့်ထိန်းရပေမယ် မဟုတ်လားကွယ့် အဲ့သဟာကြောင့် သတိထားပါတူမတော် ပြောအဆို အနေအထိုင်စသဖြင့် နန်းမူနန်းဟန်ကြွယ် ရမယ့်ကွယ့်
တူမတော် လိုက်နာပါ့မယ် ဘု၇ား
အမိုက်အမှားလေးမို့ ခွင့်လွှတ်တော်မူးပါ့ ဒွေးတော် ဘုရားးးးးးးး
Addy: သင့်လှပေတယ် တူမတော် တူမတော်ဟာဖြင့်ရင် ဒွေးတော် ရဲ့ သင်ကြားမှုအောက်မှာ နန်းဟန်ကြွယ်ကြွယ် နဲ့ ဒွေးတော် ကိုဂုဏ်တက်စေပေမယ်ကွယ့်
myittaryongpyan: ရွှေစိတ်တော် ငြိုလို့ မပူပါနဲ့ဒွေးတော်
Addy: တူမတော် စာလုံးပေါင်းလေးတွေကလဲ တကယ်တန်းတော့ ဒွေးတော်တို့ ရဲ့ မြန်မာမှု မြန်မာဟန် ကိုထိန်းတဲ့အရာ မှာ သေချာမှုရှိရမယ်ကွယ့် ဆင်ခြင်ပါတူမတော်
myittaryongpyan: တူမတော်သဟာဖြင့် ဒွေးတော်ရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှု အောက်မှာ ထာဝရ ခစားလျှက်ပါ
အခုခေတ် ကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့
Addy: စိတ်ကူးရှိပေတယ် တူမတော်ငှယ့်
Addy: ခုတူမတော်နဲ့ ဒွေးတော်ရဲ့ ချက်တင် ခန်း ကိုတင်မယ် လို့ ရည်ရွယ်ထားပေတယ်တူမတော်
myittaryongpyan: သင့်မြတ်လှကြောင်းပါ ဒွေးတော်
Addy: ကဲကဲ ညီလာခံ အရ
တိုင်းရေးပြည်ရာလေးတွေ ဆွေးနွေးကြပေအုံးစို့ရဲ့ တူမတော်
myittaryongpyan: တူမတော်ရဲ့ မအားမလတ်တဲ့ တာဝန်တွေကြောင့် အခစား ပျက်ကွက်ခဲ့တာကိုဖြင့် ရှေးဦးစွာ တောင်းပန်ပါတယ် ဒွေးတော်
ကျန်းခန်သာလို့ မာပါစ ဒွေးတော်
Addy: အိမ်း ကျန်းမာပေတယ် တူမတော်
အရင်ရက်တွေကဖြင့် ဒွေးတော် လဲ လူကြီးသဘာဝ ချူချာပေတယ် ကွယ့်
သို့ပေသော်လည်း စင်္ကပူရ အရပ်နေ
မောင် ကာကာဂျိုမင်းကြောင့် ဒွေးတော် မှာ ချူချာကြောင်း မပြောရဲပေဘူးတူမတော်
myittaryongpyan: အင်း ... အထိမ်းတော်တွေ လျှေက်တင်တာဖြင့် ဒွေးတော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး မကြာခဏ ဆိုသလို နေထိုင်မကောင်းဖြစ် ဆိုပ...
တူမတော်က မအားလပ်တော့ ဒွေးတော်ကို ပြစ်ထားသလိုများ ဖြစ်လေမလားလို့ စိတ်တော်ပူပန် နေမိပါရော့ ဘုရားးးးး
myittaryongpyan: အင်း မောင်မင်း ကာကာ ဘာများ ဒွေးတော်ကို စိတ်ငြိုငြင်အောင် ပြုတော်မူပါသလဲ ဒွေးတော်
Addy: အကြောင်းအရင်း ကိုလင်းရလျှင်ဖြင့် ထိုထို ဂျိုကာ မောင်မောင် ကြားလျှင်ဖြင့် ဒွေးတော်ရဲ့ ချူချာ ဆိုသဟာ ကို သူ့ရဲ့ ကုလားဖြူစကား ဘောနပ် လို့ ခေါ်တဲ့အပိုပေး အလိုက်ထည့် မှာထည့်ရေးကာ ကလောင်ဆော့ မှာ စိုးမိပေတယ် တူမတော်
myittaryongpyan: အင်း ဒါဟာဖြင့် ဒွေးတော်ကို ချစ်ခင်ကြည်ဖြူ လှပေသောကြောင့်ပါ ဒွေးတော်ရယ်
စိုးရိမ်တော် မမူပါနဲ့ ဘုရားးး
Addy: အိမ်းကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ တူမတော်
myittaryongpyan: တူမတော် တာဝန်နဲ့ အဲဒီအရပ်မှာ နေစဉ် တကြိမ်တခါ ဆုံတွေ့ဘူးပါတယ် ဒွေးတော်
Addy: ဒီလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တိုင်းတပါးမင်းညီမင်းသားတွေ ရဲ့ ကျိုးရို မှုကိုတွေ့ရတာ ဒွေးတော် နှစ်ထောင်းအာရဖြစ်မိပေတယ်ကွယ်
myittaryongpyan: နောက်တဖန်များ တွေ့ခဲ့ရင် နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့ပါမယ် ဒွေးတော်
Addy: သင့်တော်ပေတယ် တူမတော် ဒွေးတော် တို့ ကလဲ ကြီးမြတ်တဲ့သဘော ပြည့်ဝတဲ့ စိတ်အလှ ကိုပြသရပေမယ်ကွယ်
myittaryongpyan: ဘုန်းတန်ခိုးကြောင့် ချစ်ခင် ကြည်ဖြူ ရှိလျှက်ပါ ဒွေးတော်
Addy: အိမ်းကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ
myittaryongpyan: ယနေ့ညီလာခံမှာ ဒွေးတော် ဘာများ မှာကြားမွက်ခွန်း ချွေ မှာပါလဲ ဒွေးတော့်
myittaryongpyan: တူမတော် လိုက်နာလျှက်ပါ ဘုရား
Addy: အရေးကတော့ ဖြင့် ပေါ်ပေပြီ တူမတော်
myittaryongpyan: တင်ပါ့ ဒွေးတော်
Addy: ရှူရှ နိုင်ငံတော်နေ ညီနောင်နှစ်ပါးက တူမတော် ကို တင်တောင်းထားတယ် ကွယ့် တူမတော်
ဤအရေးအတွက် ဒွေးတော် က တူမတော်ရဲ့ ဦးရီးနဲ့ တိုင်ပင် ကာမှာ တူမတော် ရဲ့ သဘောထားကိုလဲ ဒွေးတော် တို့ က တိတ်အင်တူကွန်ဆစ်ဒရေးရှင်း အမှုပြုချင်ပေတယ် တူမတော်
တူမတော်ရဲ့ ဘ၀ရွေးချယ်ခွင့်ကို ဒွေးတော် မည်သို့ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါသတုန်း ဘုရား
တူမတော် သဘောမှာဖြင့် ဒီညီနောင်တွေကို ရန်မပွားစေ လိုပါဘူး ဒွေးတော်
Addy: ဒွေးတော် သဘောကတော့ မင်းသားငယ်က တူမတော်ကိုမှမရရင် ဖြင့် အဆိပ်ရည်သောက် ဇိဝိန်ခြွေဖျောက်မယ်လို့ လူငယ်မာန်နဲ့ အသံပစ်နေတယ် တူမတော်
myittaryongpyan: မြတ်စွာဘုရားးးးးးးးးးးး တူမတော် မိုက်မှားပြီနဲ့ တူပါတယ် ဒွေးတော်
Addy: သဟာကြောင့် ဒွေးတော် သဘောက တော့ မင်းသားငယ် ကိုတူမတော်နဲ့ လက်ဆက်ပေးပြီးသကာလ မင်းသားကြီး ကိုလဲ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်မဖြစ်ရလေအောင် ဒွေးတော်ပဲ အနှစ်နာခံ ပစ်သာကြံမယ် စိတ်ကူးမိပေတယ် တူမတော်
myittaryongpyan: အောင်မလေး ဒွေးတော် ဘုရား
Addy: သင့်တော်ပေရဲ့မဟုတ်လား တူမတော်
myittaryongpyan: တူမတော်ရဲ့ အသည်းကို ဟက်တက်ကွဲစေမယ့် စကားကို ချွေရက်ပါပေတယ် ဒွေးတော် ဘုရား
တူမတော်ဟာဖြင့် ဒွေးတော်နဲ့ ဦးရီးတော်ကို မိဘသဖွယ် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာသာ ပေးတော်မူပါ ဘုရားးးး ပေးတော်မူပါ ဘုရားးးးး
Sent at 10:09 AM on Wednesday
အဒွေးတော် ဝေခွဲရခက်ပေတယ် တူမတော်
myittaryongpyan: ဒွေးတော်လည်း စဥ်းစားဆင်ခြင်ပေးတော် မူပါ့ ဘုရားးး
တူမတော်တို့ရဲ့ ချစ်ခင်ဆုံမက်မှုဟာဖြင့် ကြာငြောင်းခဲ့ပါပြီ ဒွေးတော်
Addy: စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင် မင်းသားကြီး မျက်နှာ ဒွေးတော်အတွေးဝင်ဝင်လာပေတယ် တူမတော်
myittaryongpyan: ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကြောင့် ဆုံမက်ရန် ခက်ခဲနေရကြောင်းပါ ဘုရား
Addy: မင်းသားငယ် ဘက်ကြည့်ပြန်တော့လဲ တူမတော့် အပေါ် မေတ္တာစိတ်တွေ ယိုဖိတ် များလွန်းနေတယ် မဟုတ်ပေလားကွယ့်
myittaryongpyan: မှန်လှပါ ဒွေးတော်
Addy: အိမ်း ဒွေးတော် စိတ် ဥာဏ်အလင်းပွင့် ပြီတူမတော်
myittaryongpyan: ဆုံးမပါ ဒွေးတော်
Addy: ဒွေးတော် ဦးရီးတော်နဲ့ တိုင်ပင် ပြီးသကာလ တူမတော် အတွက် မင်းညီမင်းသား နှစ်ပါးလုံး ကို တောင်ညာစံ မြောက်ညာစံ ထားရင် သင့်တော်ပေမယ် မဟုတ်လားတူမတော်
myittaryongpyan: ဒွေးတော်နဲ့ ဦးရီးတော်ရဲ့ ဆုံးမမှုကို မလွန်ဆန်ဝံ့ ကြောင်းပါ ဘုရား။။
သင့်တော်သလိုသာ စီစဉ်ပေးတော်မှုပါ ဒွေးတော် ဘုရားးးးးးးးး
Addy: အိမ်း နန့်တော်မူပေတယ် တူမတော် ဒွေးတော် တူမ ပီသပေတယ် ဦးရီးတော်ကြားလျှင် အားရ နှစ်ထောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ကွယ်
myittaryongpyan: မှန်လှပါ ဘုရား
Addy: အရီးတော် အခု ပြောကြားသမျှ တင်ကာသ လိုက်ပေတော့မယ်ကွယ့်
myittaryongpyan: နာခံလျှက်ပါ ဒွေးတော်
တူမတော် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော အရပ်သို့ သွားခွင့်ပြုတော်မှုရန် လျှောက်တင်ကြောင်းပါ ဒွေးတော်
Addy: ကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ
myittaryongpyan: ဦးခိုက်လို့ နှုတ်ဆက်တော် မှုပါတယ် ဒွေးတော်
Addy: ညီလာခံ ရုတ်သိမ်းစေ
Sent at 10:25 AM on Wednesday
myittaryongpyan: မှန်လှပါ သင့်မြတ်ကြောင့်ပါ ဘုရား
Posted by တီချမ်း at 10:11 PM 16 comments: Links to this post
ကြယ်ကိုစီပြီး လေထဲမှာ ရေကိုရှူတဲ့လူ
(P.S: မိညီမ ရဲ့ chatting ထဲက ကဗျာ post ထဲမှ
သူလို ကိုယ်လို လူမသမာတွေကသာ
တကယ်ပါ ကိုယ်လဲ အခွင့်အရေးရရင်
အဲ့လိုနဲ့ လူတံခွန်ပုံက မရှိတာပဲလား
Posted by တီချမ်း at 3:27 PM 12 comments: Links to this post
မချော ၄ ယောက် ကိုယ်တယောက်
အမှတ်တရ တင်တာပါ အမှန်က မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာတင်မှာပါ
ဒါတီ ရန်ကုန်မှာတုန်းက တော်တော်တွဲဖြစ်တဲ့ မမတွေပါ
တီနဲ့ အသက်မတိမ်းမယိမ်းတွေ တယောက်မှမပါပါဘူး ခိခိခိ နည်းနည်း ကြီး ကြပါတယ်
မျက်မှန်နဲ့ ဆံကောက် Brunet က တီ့ အမ ဆိုလဲ ဟုတ် အကို ဆိုလဲဟုတ်ပါ တီ့ ကိုအနှိုင်အကျင့်ဆုံးကလဲသူပါပဲ
နောက်လ ကျရင် သူ့မွေးနေ့ ရှိပါတယ် အဲ့တော့မှအကျယ်ပြောပါမယ် သူ့အကြောင်း
ခုမွေးနေ့ရှင်က သူနဲ့ ပတ်သက် ပြီး တီခင်ရတဲ့အမပါ သူတို့ က ၄ ယောက်ပူးကြီးတွဲကြပါတယ်
နောက်ပိုင်းတီ တို့ နဲ့ ပေါင်းမိပြီး ရထားတွဲကြီး ဖြစ်လာတာပါ
ခုကဗျာရေးပေးထားတဲ့မွေးနေ့ရှင်က အီ့ညှောင်မ လို့တီ တခါတခါ ခေါ်ပါတယ် သူက စကားပြောရင် ပဲတွေများပြီး သကာလ အသံက အီ့ညှောင့် အဲညှက် ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါ ပြီးတော့ သူက ဘာမှမလုပ်ထားပဲနဲ့ ကို ကောင်းနေတဲ့ ရုပ် ပေါက်ပါတယ် (ခိခိ ရုပ်ခံနဲ့ လုပ်ကြံလို့ရတယ် ဆိုတာ သူ့ ကိုပြောတာနေမှာ)
အဲ့ကြောင့်လဲ သူအခု လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ သူ့ရုပ်က အံဝင်ဂွင်ကျ ကိုဖြစ်နေတာ စိတ်ဝင်စားသွားပြီမှလား ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ (ပြောပြဘူး သတ်ရင်သတ် နမ်းချင်နမ်း ခိခိခိ) ဘယ်ဘက်ပုံ ၁ က ထောင့်ဆုံး မမ ၀၀ က တီ့ အမ ကျောင်းနေဘက်ပါ သူလဲတီ့ ကိုအရမ်းခင်ပါတယ် သူက အရမ်းလဲချစ်စရာကောင်းပါတယ် တလုံးတခဲကြီးလေ ခိ ပြီးတော့ မွေးနေ့ကဗျာရှင် မမ ပါ သူ့နောက်က ခေါင်းလေးပဲပေါ်နေတာက တီ က ချစ်စနှိုးနဲ့ ၀က်ဝံ လို့ခေါ်တဲ့ ကိုကိုကြီးပါ သူက အရမ်းစောင့်ရှောက် လို့ အရင် အလုပ်တူတူလုပ်တုံးက ခရီးထွက် ရရင် သူနဲ့ ပဲထွက်ချင်ပါတယ် ခိခိ အလုပ်ကိစ္စပဲနော် ကျန်တာမပါ (သိနေတယ် အတွေးတွေကို ခိခိ) နောက်ပြီးတော့ မချော ၄ ယောက် ကြားက အမိုက်စားလေးက တော့ အီဖေကိုယ် ပေါ့ ခိခိ ပြီးတော့ ခုန က ပြောတဲ့ တီ့အမ ဆံကောက် နောက် အရင် အလုပ်တူတူလုပ်ပြီး အဲ့တုံးက နည်းနည်းမှအကြောမတဲ့ တဲ့ အက်မင် မမ ပါ ခုတော့လဲတည့်လိုက်တာ မှ ဟိုဘက်ကမ်း ခိခိ အလုပ်တူတူ မလုပ်ရတော့လို့ဖြစ်မယ်း=)
နောက်တပုံကိုရှုပါ ညာဘက်က ကဗျာရှင်မမ ရယ် တီ့အမ ရယ် အလည်က တီ တို့ ရဲ့ dance instructor ဆရာ ဖဦးထုပ် ရယ် (သူက တီ တို့ ထဲက တယောက်နဲ့ ဘာညာဘာညာ ခိခိ ခန့်မှန်းကြည့်နော် ပြီးတော့ တီရယ် နောက် မမ၀၀ တယောက် က တီ ဟိုတလောက ရေးတဲ့ ကဗျာ စောယူရီဂယ်လာ ရိုးမြူးလက်စ် စမစ်ဒွန်း (အံမလေးဟဲ့ ရှည်သောနော်) နဲ့ တူတူ တွဲကြတာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကတည်းက ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းပါ အရမ်းခင်ပါတယ် အင်း ပြင်သစ်ကျောင်း အာလီးယောင်စ့် မှာ တက်တုံးက စခင်ကြတာထင်တယ်
အဲ့လိုပေါ့ အင်း အဲ့ဂလို
ဒါကတော့ မွေးနေ့ ကဗျာ ရှင် မမ လှလှ ပါ ထထ ကမက တော့ တီလဲမသိ ကတော့ကတယ် ခိခိ အပေါ်ပုံတွေ က စဒိုးနား ပက်ဒီ ဘားမှာ ရိုက်ထားကြတာ လေ ခိ ကဲကဲ သူ့အကြောင်းလေးတွေ သိချင်ရင် အောက်က ကဗျာ လေးကိုဖတ်ကြည့်ကြပါနော် ကဗျာ နာမည်ကို “သူမ” လို့ပဲ ရိုးရိုးလေးပေးထားတယ်
သူမ နဲ့ ဘုရားပဲ သိမယ်။
သူမ ကိုသိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ က
(ခိခိ ဂယ် ပြောတာ)
ပရမ်း ဘက်လှည့် စမ်း။
(ခမ်း ဂီ ပု မီ)
ပဲခူးရိုးမ က ၀က်ဝံ အညိုတကောင်ရယ်
Remembrance for 22nd April 2009
Congratulation u r 40!
Posted by တီချမ်း at 4:41 PM 8 comments: Links to this post
Labels: မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ
ကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသားလို့ပြောရင်ရတဲ့
လူတန်းစားဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုလဲ ကျွန်တော်မုန်းပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တာလေးတွေပဲပြောပါ့မယ်
အဓိက ကတော့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်
(အမြင်မတူတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ မြင်သလိုနဲ့ ပြောတတ်သလိုပဲပြောပါမယ်။ ကျေနပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နားလည်အောင်လေ့လာနေပါတယ်)
တချို့က လပေးကဒ်နဲ့စီးပါတယ် အဲဒီလူတွေကိုကျွန်တော်က ကဒ်ပြားနဲ့စီးသူများလို့ခေါ်တာပါ
လပေး ကဒ်မှာမှ နှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်
ပထမ တမျိုးက ဘယ်လောက်ဝေးဝေး စီးစီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြတ်တယ်
၂၀ ၊ ၂၅ ဘတ် စသဖြင့်ပေါ့
ဒုတိယ တစ်မျိုးကတော့ ခရီးအကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးမှ ဖြတ်တာလေ
ဘယ်နှစ်မှတ်တိုင်ကို ဘယ်လောက် စသဖြင့်ပေါ့
နောက်တမျိုးက အကြွေစေ့ သုံးပြီးစီးသူများပါ
ခရီးအကွာအဝေး အလိုက် အကြွေစေ့လဲ ပြီးကဒ်ပြားဝယ်စီးတာပါ
စကားမစပ် အခုပြောနေတာ မိုးပျံရထား အကြောင်းပါ
ကျွန်တော်နေ့တိုင်း အလုပ် အသွားအပြန်စီးရပါတယ်
တခြားအနေနဲ့ မြေအောက်ရထား နဲ့ ပုံမှန်မြေပေါ်မှာတင်သွားတဲ့ရထား (ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ မြို့ပတ်ရထားလိုဟာပေါ့) နှစ်မျိုး ရှိပါသေးတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့ မိုးပျံရထားအကြောင်းပဲပြောမှာပါ
ဟုတ်ကဲ့ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာနားဖောက်တာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး
ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်လေးက သူ့ရဲ့နားသံသီးမှာအကွင်းအကြီးကြီးတတ်ထားတာပါ
၅ ဘတ်စေ့လောက်ရှိတဲ့ ကွင်းအကြီးကိုဖောက်ပြီးတတ်ထားတာပါ
(၅ ဘတ်စေ့ မမြင်ဘူးသူများအတွက် မှန်းရလွယ်အောင် ၅မူးစေ့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်)
သူ့နားက ကွင်းကြီးနဲ့ ဘေးသားနဲနဲပဲကျန်တော့တယ်လေ
လေးပေါက်ပါ (ကျွန်တော့်မှာလဲ လေးပေါက်ဖောက်ထားတဲ့အစ်မတစ်ယောက်ရှိဖူးပါတယ်)
သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာတော့ နားပေါက်တစ်ပေါက်ဟာ အသည်းတစ်ခါကွဲဖူးခြင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့တော့ဖတ်ဖူးတာပဲလေ
အဓိကပြောချင်တာက ကျွန်တောတို့်ရဲ့ Y2K Generation လို့ခေါ်တဲ့
တချို့ကလဲ Me Generation လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဆက်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့တွေးမိတာပါ
ကျွန်တော်လဲ လူငယ်တစ်ယောက်ပါပဲ (အသက်အပိုင်းအခြားအရတွက်ရင်ပြောတာပါ)
ဆေးမှင်ကြောင် လို့ခေါ်တဲ့ Tattoo
သူ့လက်မှာရေးထားတာက BELIEVE IN MYSELF ပါ
ဒါပေမယ့် ဆေးမှင်ကြောင်ဆရာရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် BELLEVE IN MYSELF ဖြစ်နေပါတယ် သူ့ကိုယ်သူလဲသိပုံမပေါ်ပါဘူး
လူတွေအမျိုးမျိုးကအတွေးတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ Tattoo ထိုးကြပါတယ်
မင်းသမီးထိုးထားရင်လဲ လိင်ဆွဲဆောင်မှုအလွန်ရှိပါတယ် နေရာကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေ
ကျွန်တော်လဲ တခါတခါ Tattoo ထိုးဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်
နာမှာကြောက်တာရယ် ပြန်ဖျက်လို့မရနိုင်တာရယ်ကိုတွေးပြီး မထိုးဖြစ်ပါဘူး
တစ်ဘ၀လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကတိက၀တ် တစ်ခုပဲတဲ့
(သူက English လို Commitment ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးသွားပါတယ်)
ဒီမြို့တော်ကြီးကိုရောက်မှ ကျွန်တော် စ ရင်းနှီးရတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ပါ
ဒီလိုပြောရတာက ကျွန်တော် အရင်နေခဲ့တဲ့မြို့ကြီးမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေသိပ်မတွေ့ဖူးလို့ပါ
သူတို့တွေက ရထားစီးဖို့တက်ရတဲ့ စက်လှေခါးမှာပိတ်တတ်သလို
ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုပဲ ဒီနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုများလားလို့
Posted by တီချမ်း at 12:41 AM 18 comments: Links to this post
တစုံတယောက်က ကိုယ့် ကို စကားတခွန်း ပြောလိုက်တယ်
ပြီးတော့ မှ နောက်တယ်လို့ ဆိုမယ်
ဥပမာ..................လို့ ပြောလိုက်တယ် လို့ပဲဆိုကြပါစို့
နောက်တယ် မနောက်ဘူးဆိုတာ အနောက်ခံရတဲ့ လူဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်လို့ ကိုယ်တော့ ထင်တာပဲ
စနောက်တာပါဆိုပြီးပြောတဲ့ လူတွေရဲ့ ၅၀% ဟာစိတ်ထဲက တကယ်ပါလို့ အဲလိုပြောတာတဲ့
ကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ရီဆတ်ခ်ျက ပြောတာ။
ပြီးတော့ ပြောတဲ့လေသံရဲ့ အရောင်၊ tone တုန်း ပေါ့ အဲ့တာကွာတယ်
ဥပမာ နောက်တခုပေးရရင် မိန်းမလတ်(သက်လတ်ပိုင်းမိန်းမ) တယောက် ကို အပျိုကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့ အဲ့တာ ကိုယ်က စနောက်ပြီးခေါ်တာဖြစ်ပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲ
နောက်ပြီး ဒါဟာ verbally abused လုပ်တာတမျိုးပါ sexual harrassment လို့လဲ
နာမည်တပ်၊ ပုဒ်မ တပ်လို့ရပါသတဲ့ သတိထားကြပါနော် ကိုကိုကာလသားများ
ဒါလေးက လူတော်တော်များများ တမင်တကာ ပဲဖြစ်ဖြစ်
မတော်တဆ လို့ နာမည်လှလှလေးတပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူးလွန်ဖူး ကြတဲ့ ဥပမာ ပေးကြည့်တာပါ
အပေါ်က ကိုယ်ပြောချင်တာတွေနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး
ခုတလော ကိုယ်ခဏခဏ စတယ် စတယ် ဆိုပြီး “အစ” ခံရပါတယ်
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုယ် အစော်ကားခံရတယ် လို့ ခံစားရပါတယ်
ကိုယ်က အဲလိုအပြောခံရအောင်နေခဲ့လို့ လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်
ဟော တခါ “စတယ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို
ကျေနပ်အောင် တဘက်သားကို ပြောဆိုပြီးတော့မှ
တောင်းပန်းပါတယ် ဆိုတာ ကလဲ အင်း.....................
တခါတခါ လွန်သွားပြီးရင်တော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်
ခုန က ကိုယ်ပြောခဲ့ သလိုပဲ ကိုယ်အဲလိုအပြောခံရရင်
ခင်ခဲ့တာလေးတွေ ကို တကယ်နှမြောမိတယ်
ဘေးမှ တင်ထားတဲ့ သတိပေးကြေညာချက်ကလေးပါ
ဖြုတ်တော့မှာမို့လို့ အမှတ်တရ တင်ထားလိုက်တာ ဘယ်သူ့ ကိုမှမရည်ရွယ်ပါဘူး
ဒေါ်ရီတာ သာသိရင် ပြောအုံးမယ် ကြောင်ကိုရေချိုးပေးပြန်ပြီလို့
ပြီးရင် မိတ်ကပ် ဖို့ ပြီးလှလှလေး ၀တ်ပေးအုံးမှာ ခိခိ
၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်
မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted by တီချမ်း at 10:37 AM 11 comments: Links to this post
ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀
Posted by တီချမ်း at 12:06 PM 10 comments: Links to this post
အပြင်မှာမင်းနဲ့ အတူတူ မိုးရေထဲမှာ
ဒါပေမယ့် လဲ အဲ့ဒီအချက်ကို
မင်းငါ့ရဲ့ အိမ်တံခါး ရှေ့မှာရပ်နေတယ်
မင်းရဲ့ေ-ာက်ဂရုမစိုက်တဲ့ စကားတွေကလဲ
မင်းရဲ့ စီးကရက် ကိုခဲရင်း
မနက်စာ စားပွဲပေါ်မှာ စကားပြောတယ်
မင်းရဲ့ အနုပညာအပေါ် မြင်တဲ့ ဒဿနတွေ၊
မင်းမိုးဇက်ကို မင်း ဘယ်လောက်ကြိုက်တာတွေ စသဖြင့်………..
မင်းက မင်းချစ်တဲ့ သူတွေအကြောင်းပြောနေလေ့ရှိတယ်
ငါ့ရဲ့ ဂစ်တာ ကိုငါ ပုံပန်းမကျ ကိုယို့ကားယား တီးခေါက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့
သန့်ရှင်းတဲ့ ပိုက်ဆံဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ကိုသေချာသိတဲ့အရာတွေကိုပေါ့
ငါ့ရဲ့ ညစ်ပေနေတဲ့ လက်တွေကိုငါ
ငါ့ ကျောရဲ့ အနောက်ဘက်တနေရာရာ မှာ
တနေရာရာမှာတော့ ငါက မင်းရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွေဖီနေပြီပေါ့
ငါနဲ့ အသွင် ပိုတူတဲ့တခြားတယောက်နဲ့ပေါ့
ပြီးတော့ဒီ “အရူးထခြင်း” ကစားနည်းက
ငါ့ရဲ့ တကိုယ့်လုံးကို တဖြည်းဖြည်းစုတ်ဖြဲနေသလို
Song Title: Foolish Games
Posted by တီချမ်း at 2:57 PM9comments: Links to this post
Labels: jewel's songs ခံစားမှုများ, ပုံတွေ
Close friend day တဲ့လားကွယ်
ဘ၀ ဟာ နောင်တတွေနဲ့ နိူးထလာရဖို့ တိုတောင်းလွန်းပါတယ်
ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့ လူတွေ ကိုမေ့လိုက်ပါ
ဒီနေ့ ဟာ “ကမ္ဘာ့ သူငယ်ချင်းကောင်းနေ့” လေးပါ။
I Appreciated You, Once beapart in my life!!
ကမ္ဘာ့ သူငယ်ချင်းကောင်းနေ့ မှာ ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့
Posted by တီချမ်း at 11:59 PM 1 comment: Links to this post
ဖိုးစိန်ရှာတဲ့ ပြဿနာ (သို့) ကြောက်စရာတီတီချမ်း (သို့) အပျက်ပျက်နဲ့သွေးထွက်တဲ့ နှာခေါင်း (သို့) sensitive ဖြစ်ခြင်း
မနေ့ က မိုးခါးမွေးနေ့ ဆုတောင်း မှာ အပြန်အလှန်ရေးကြပါတယ်
နောက်တော့ ညကျ အိပ်ခါနီး နှုတ်ဆက်တဲ့ ထိအိုကေပါပဲ(အိုကေပဲထင်ခဲ့တာပါ)
တီ က တနေ့လုံးမိတင်နဲ့ ညားနေလို့ပါ
ညနေကျတော့ ဒီနေ့ ရန်မဖြစ်ရသေးတာနဲ့ တခုခုလိုနေသလိုဖြစ်နေတာနဲ့
စောင့်နေပါတယ် မနက်ဖြန်ထ စရာမလိုတာလဲ ပါတာပေါ့လေ
ဖိုးစိန်ပြန်လာတော့ တီ့ ဆီမှာ ၃ နာရီခွဲပါပြီ မနက် ပါ
ရောက်တော့ စကားပြောမယ် ဆိုပြီး စောင့်နေတာနဲ့ ပြောပါတယ်
သူပြောချင်တာ က တီ က ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့
ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မိုးခါးလေး မွေးနေ့ ကဗျာ ကို တီ က အစက ဓါတ်ပုံ ထည့်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူးတဲ့
သူက မိုးခါးကို မွေးနေ့ မှာ ရည်းစားစကားပြောမယ် ဆိုပြီး တီ့ ကိုပြောတော့ မှ တီ က ဓါတ်ပုံထည့် ဖို့ စိတ်ကူးရသွားတယ် လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ တော်ရုံဆိုဘာမှမပြောပါဘူး ခုဟာက စွပ်စွဲတာဖြစ်သွားပြီ ဘောင်ကိုကျော်သွားပြီ အောက်မှာ ပြောကြတဲ့ စကားအသွားအလာ ကိုကြည့်ပါ
သူ့ အသုံးအနှုံးက မသိစိတ်တခု ကို ရိပ်ခနဲ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် သူပြောတဲ့ အတိုင်းပြန် quote လုပ်ထားတာပါ
ဒီပိုစ့်မရေးခင် စဉ်းစားပါတယ် မိုးခါးလဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ် ဆိုတာ သိပါတယ်
ရှင်းရှင်းပဲ ပြောတတ်၊ ပြောချင်ပါတယ် စကားကိုလဲ ယောက်ျား ပီပီ ရှင်းရှင်းပြောတာပဲကြိုက်ပါတယ်
တီချမ်း တို့ က ရှင်းပါတယ် အစကတည်း က -င်ခံတယ်ပြောထားပြီးသား၊ ခြောက်နေတယ်ပြောလဲ စိတ်မဆိုးဘူး
အင်းစကားကိုတော့ ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမှ ကြိုက်တယ်
ခနဲ့ သလိုလို ရွဲ့သလိုလို အပြောတွေ ကိုမကြိုက်ဘူး ကြည့်မရဘူး
ခုဒီပိုစ့် ကိုရေးတဲ့ အတွက် ဖိုးစိန်နဲ့ ခင်မင်မှု ဆုံးခန်းတိုင်နိုင်တယ် ဆိုတာ သိပါတယ်
တကယ်ခင်ခဲ့တာပါ ထားပါတော့ မနှမြောနေတော့ပါဘူး
တခါတည်းရှင်းပါမယ် တီ ဒီဘလောခ် ကိုရေးနေတာလဲ ၀ါသနာပါလို့ပါ
ကြိုက်ရင်လာဖတ် ကြိုဆိုပါတယ် မကြိုက်ရင်လဲ မလာပါနဲ့ ရပါတယ် မမုန်းပါဘူး
ပြီးတော့ တီ က စိတ်ဆိုးခဲတယ် စိတ်ပဲ ပျက်တတ်တာ
ပျက်ပြီး “ဟင်” ဆိုလဲ ပြန်မလှည့်ကြည့်ချင်တော့ဘူး
ကိုယ့်ရှေ့လာ “သေ” နေရင်တောင် ကျော်ခွ သွားမယ့် လူမျိုးပါ
ရပါတယ် ခုဒီပိုစ့်ရေးတဲ့ အတွက် စိတ်ဆိုးရင်လဲ ရတယ်
sein lyan tun: မောရှမ်းမြေ အစည်းအဝေးသို့ ဖိုးစိန်အားမဖိတ်သူများ ကုလားကြီးတွေ ကုလားမကြီးတွေနဲ့ညားပါစေ အဟီးး
Sent at 11:55 PM on Friday
Sent at 3:04 AM on Saturday
မနေ့ ကမိုးခါးမွေးနေ့မှာတင်တဲ့ ချမ်းပိုစ့်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်
Addy: ဖိုးစိန် စကားကိုယောက်ျား လိုရှင်းရှင်းပဲပြော
sein: ယောကျာ်းလို ပဲပြောနေတာလေ
Addy: အဲ့တာ ဆိုဘာလို့ ကြောက်စရာကောင်းတယ် လာပြောနေလဲ
Addy: ဟာ ဘာလဲကွာ
Addy: ကိုယ်ရေးတဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းအားလုံးပုံ ပါတယ်
Calling sein lyan tun at 3:37 AM on Saturday
Call with sein lyan tun not answered at 3:37 AM on Saturday
sein: ချက်လို့ ရတယ်ဗျ
Addy: ကိုယ်ရေးတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းအားလုံးပုံပါတယ်
Addy: အရင်ဟာတွေ ကိုပြောတာ
အဲ့တာ ကိုက ယောက်ျားမဆန်တာ
Sent at 3:38 AM on Saturday
(ပြောသလောက်ကို စပြောတဲ့အချိန်က အတိုင်းအပိုအလိုမရှိ ဘာမှမပြုပြင်ပဲထည့်ထားပါတယ် ကုန်ကုန်ပြောရရင် စာလုံးပေါင်းတောင်ပြင်မထားပါဘူး
လာငြင်းရင်လဲရှင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဂျီတော့ခ်ထဲမှာ ရတ်ကော့ခ် ရှိပါတယ်)
sein lyan tun: ဂျန်ရာပီးဂျ
Addy: ကိုယ်လဲ မကြိုက်လို့တင်ထားတာ
Sent at 4:09 AM on Saturday
မကြိုက်တဲ့လူတွေများမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဖတ်ပြီး ဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့ပိုစ့်မျိုးပါ
ဒါပေမယ့် အစကတည်းက တီက အကျိုးပြုစာပေရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
အဲ့တော့ ဖတ်လို့ မဆိုင်သူတွေ စိတ်ညစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်
မိုးခါးကိုလဲ ဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ် သမီးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလို သမီးကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ကိုကိုယ် guilty ဖြစ်မှာဆိုးလို့ ကြိုပြောထားတာပါ
အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်ပဲ လူတကာ ကိုဘာမှမဟုတ်ဘဲ ဘာမှမမှားဘဲ ဘာမှမလုပ်မိဘဲ လိုက်တောင်းပန်နေရတာကိုလဲ မကြိုက်ပါဘူး
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဖတ်ပြီးသွားလို့ စိတ်ညစ်ရရင် ဘလောခ်လောက ရဲ့ မဲပြာပုဆိုးတထည်၊ရန်ဖြစ်ပွဲတပွဲတိုး တယ်ပဲ ထားလိုက်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..............
Posted by တီချမ်း at 3:42 AM 10 comments: Links to this post
(ဒနည က မေးပါတယ် မေးခွန်းတွေ က ဘယ်မှာလဲ တဲ့ သူက မှန်မှန်မှမလာတာနော် အဲ့တော့ဘယ်သိပါ့မလဲနော် ကဲပါလေ ဒီမှာရော့ ပြန်ထည့်ပေးထားတယ် မေးခွန်းတွေကို)
၁) စာရေးခြင်း (အမှန်က စာတိုပေစ၊ ကဗျာ ရယ် သီချင်းရယ်ပါ အဲတော့ ၃ မျိုးပေါ့ ခွဲပြောလဲရတယ် မခွဲပဲပေါင်းပြောလဲရတယ် အဲတာကြောင့် ၃မျိုးလို့ပြောတာ။ ဟုတ်ကဲ့ တီချမ်းက သီချင်းလဲရေးပါတယ် (သိတယ်သိတယ် တော်လိုက်တာ လို့တွေးနေပြန်ပြီမှလား...? ခိခိခိ နောက်မှကြုံရင် တီရေးထားတဲ့ ကော်ပီ သီချင်းတွေ တင်ပေးပါအုံးမယ် ဘာလို့ ကော်ပီရေးသလဲဆိုတော့ လေးဖြူ အငဲ မျိုးကြီး ဖဖကသ တို့ပြောသလိုပါပဲ ကော်ပီ လဲသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူပါ နောက်တခုက အင်စတျူမန့် ဘာမှမတီးတတ်လို့ပါ.............ခိ)
၂) ရေကူးခြင်း ဟိုးအရင်က တော်တော်ကူးဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားကန်မှာတောင် လက်ရွေးစင် အဖြစ် camp ၀င်ဖူးသေး (စာရေးသူ ၏ အကြွားချပ်) မိညီတောင် ခုသွားချင်နေတဲ့ကန်ပေါ့ ခိခိခိ ဟုတ်တယ်မှလား ဒနည………..ခုတော့ ခြေထောက်မှာ ခွဲစိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းရေကူးရင်နာပါတယ် ခဏ ပဲကူးနိုင်တယ် ကူးပြီးနောက်တနေ့ ဆိုအတော်ခံစားရပါတယ် အဲတာလဲ ကြုံရင်တော့ ကူးဖြစ်နေသေးတာပါပဲ အမှန်က ခွဲပြီးခါစ က ဖီဇီယိုသရပီ မ၀င်လိုက်လို့လေ ခုတော့ နောင်တရနေတာပေါ့…..catwalk လဲ မလျှောက်ရတော့ဘူးတဲ့ အဟင့် ပါရီ တို့ မီလန်တို့ က လက်ခံထားတဲ့ ၂၀၀၉ ဆောင်းရာသီ ကွန်ထရက်တွေတော့ လျှော်ရတော့မယ် အဟင့် အဟင့်
၃) လေးချစ်တတ်ခြင်း၊ကလေးလိုချင်ခြင်း၊ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ချင်ခြင်း တခါကလဲရေးဖူးပါတယ် ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတာ အနုပညာတခုပါ တီသင်ယူချင်တဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ အနုပညာ တခုပေါ့ (ဟဲဟဲ မိုက်တယ်နော် စကားလုံးတွေက ပြောင်မြောက်ပါ့ မှတ်ချက်=မျောက်မဟုတ်ပါ) ခုလောလောဆယ်တော့ ကိုကိုကာကာ ကို အားကျ ပြီးမနာလိုဖြစ်နေတယ် ဒီတခေါက်ရန်ကုန်ပြန်တုံးကတောင် အမေနဲ့ ရေရေလည်လည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသေးတယ် ကလေးမွေးစားဖို့လေ တီက ကလေးပဲလိုချင်တာ မိန်းမမလိုချင်ဘူး ခိခိ ကိုယ်က ယောက်ျားပဲကြိုက်တာကို နော်
၄) ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း………အခွေဆို မျိုးစုံအောင်ကြည့်ပါတယ် drama, thriller, horror, comedy, romance, teenagers, PG, NC, Full, ဗုံး၃ လုံးကား အပြာ အ၀ါ ဆင်းရဲသား အော်ဘာတွေရေးမိပြန်ပြီလဲမသိ………..ဟင်း ခက်တယ်…ခက်တယ် တီတီချမ်း…..
၅) ခရီးသွားခြင်း အမှန်က အစက ၀ါသနာ လုံးဝ မပါတာပါ ဒါပေမယ့် ဘ၀ က ဖန်လာတော့ လုပ်သမျှအလုပ်က ခရီးအသေထွက်ရတယ် အရင် က တိုးရစ်ဂိုက်လုပ်တယ်လေ နောက် အခု လုပ်တဲ့ အလုပ်ကလဲ ခြေတိုအောင်သွားရပါတယ် တခါတခါ တော့ ညစ်တယ် ပင်ပန်းလို့ တီ က ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ဆိုတခု ပဲလုပ်ချင်တာလေ (မဟုတ်တာတွေလျှောက်မတွေးနေနဲ့......ဟွန်း)
၆) ပန်ချီးဆွဲခြင်း၊ ငယ်ငယ်က တော်တော်ဆွဲဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းပေါင်းစုံဆုဘာညာတောင်ရဖူးသေး အဟေးဟေး ကြွားရတာ အရသာရှိ ခိခိနောက်တော့ အရွယ်ရောက်လာတော့ အင်စပရေးရှင်းက မလာတော့ ဒေါ်ဂျူးလိုပေါ့အေ အချစ်အကြောင်းရေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ တီလဲ ပုံဆွဲလို့မရတော့ဘူး အိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပေါ့အေ
၇) ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတာပါ အထူးသဖြင့် အနုပညာမြောက်တဲ့ ဟာမျိုးပေါ့လေ အလှရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော် နောက်မှတင်ပေးပါအုံးမယ် ရှိသေးတယ် ခိခိခိ တုံးလုံးပုံတွေချည်းပဲတော့လဲမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်
၈) စာဖတ်ခြင်း ဒါကတော့ တော်တော်များများမှန်ကြပါတယ် ခန့်မှန်းတာ အဲ့တာမှမမှန်ရင်လဲ ............ဒါတောင်အချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီးဖတ်တယ်ဆိုလား အချိန်ရှိသမျှဖတ်တယ်ဆိုလား တယောက် က ရွှီးသေး........ခိခိ
၉) သီချင်းနားထောင်ခြင်း နှင့် ကခုန်ခြင်းပါ အရင်က က ရမှာရှက်တတ်ပါတယ် ခုတော့လဲဖြတ်လိုက်ပြီ အဲ့ဒီရှက်ကြိုး.ခိခိခိရှက်တော့ဘူး လှလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုပို ယုံကြည့်မှုရှိလာတယ်လေ............ ဟဟဟ
၁၀) တော်တော်များများမမှန်တဲ့ ဟာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ ၀ါသနာပါ အမှန်က အရိုက်ခံခြင်းကစတာပေါ့ နောက် ပန်းချီမဆွဲရတော့လဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်လာတယ်ထင်ပါတယ် သဘောတရားနဲနဲတူတယ်လေ အရာတ္ထုတွေ ကိုဘောင်ခတ်တာပဲဟာ ခိခိ နောက်ဒီကောင်က ပိုလွယ်တယ် ခလုတ်နှိပ်လိုက်ယုံပဲ
ကဲကဲကဲ ကျေနပ်ကြရဲလား ဖြေပြီနော် ..................
Posted by တီချမ်း at 11:56 AM 8 comments: Links to this post
တေ့လွဲ(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
တကယ့် ကံကြမ္မာ ရဲ့
Posted by တီချမ်း at 4:12 AM4comments: Links to this post
Labels: တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ
မနက်ဖြန်မှာ ကျရောက်မယ့် တီ့တူမ မိုးခါးလေးအတွက် မွေးနေ့ (ဒေါ်ရီတာထောက်ပြလို့ ထပ်ထည့်သည်။ အဲ့လိုပဲ ဆရာမကြီးစကားနားထောင်ရတယ်ရှင့် ခိခိပါရှင့် ကျန်သွားတာဆော်ရီးရှင့်) အမှတ်တရ ကဗျာပါရှင့်
အသိပေးသူချစ်တူမ မိရောင်ကိုကျေးဇူးအထူး အာဘွားပါတယ်ရှင့်
အမှန်ကတော့ ရိုးရိုးရေးမလို့ပါရှင့် ဒါပေမယ့် တူမတော်ကလှတပတကလေးဆိုတော့
မျောက်တွေရန်ကိုကြောက်တာနဲ့ ဒီပုံလေးနဲ့တင်လိုက်ရပါတယ်ရှင့် ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ပေါ့ရှင့်
ဒူးရင်သီး သရက်သီး နာနတ်သီး တွေကိုသောကြာနေ့တိုင်း မရောင်းချင်ရင် လက်ရှောင်ပါပေါ့နော်ရှင့်
(ဒု သ န သော ကိုပြောချင်တာပါရှင့်)
ပြီးတော့ အောက်ဆုံးမှာ ကိုကိုကာကာ ကိုအားကျလို့ဘောနပ်စ် ထည့်ပေးထားပါတယ် ရှင့်
အသက်က ဒွေး နဲ့ လေး
ကဗျာတွေ စာတွေ စပ်စပ်
Posted by တီချမ်း at 9:42 PM 29 comments: Links to this post
တီချမ်း ရဲ့ ၀ါသနာများ (တက်ခ်ပိုစ့်)
ဟိုးလွန်လေပြီးသော ရှေးပဝေသဏီ အခါကပေါ့ ....................ဘယ်သူကလဲမသိဘူး တီချမ်း ကိုတက်ခ်(tag)ပါတယ် တက်ခ်တာ ကတော့ ၀ါသနာတဲ့ ဘယ်လောက်တောင်ကြာပြီလဲဆို တက်ခ်တဲ့လူတောင်မေ့နေတာသာကြည့်တော့ အဲ့လိုမကောင်းတာနော် (jel jel and May D) လို့ထင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် အကြွေးတွေ ကိုမှတ်မိပါတယ် ရှိမရှိမသေချာတဲ့ သံသရာ ဆိုတဲ့ဟာကြီးဆီကို ယူမသွားပါဘူး ခိခိ
အဲ့တော့ အကုန်ပြန်ပေးခဲ့မယ် အမေးရှိတော့ အဖြေရှိရတာပေါ့နော် ဖြေတော့ဖြေတာပဲ
အဲ............ဒါပေမယ့် တီချမ်း တို့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ဖြေတာရိုးရိုးမဖြေဘူး ပြန်မေးမယ် မဟော်သဓာ ဆန်ဆန်ပေါ့ ပြောပါတယ် ခသမဟ လို့အစကတည်းက နော်
အဲ့တော့ တက်ခ်သူတွေ လဲကျေနပ်ပါစေ အမှန်က တီချမ်း က ပိုစ့်တော်တော်များများမှာ
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် တခါတခါ မကြာမကြာ ဆိုသလို လှစ်ဟ ပြတတ်ပါတယ်
ခုလဲ လာပြန်ပါပြီပေါ့.................တီချမ်း ဟာ ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့
ဒါတွေ ၀ါသနာပါပါတယ်ပေါ့ နော် .........................အဖြေကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂတ်စ် (guess)စေချင်တယ်လေ အဲ့တာကြောင့် ၀ါသနာ လေးတွေ ကို နံပတ်တတ်သွားတယ် ပြောမပြသွားဘူး ကိုယ့်ဘာသာတွေးကြည့်ဖြေကြည့် အဖြေညှိပေါ့လေနော် ......................
တခုဖြည့်ပြောချင်ပါတယ် ၀ါသနာတွေ ကိုအမှတ်စဉ်တတ်ထားတာ ဖြေရလွယ်အောင်ပါ အမှတ်စဉ်ရှေ့ရောက်တာ ကိုဝါသနာပိုပါတယ် လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူးလေနော်..........
တီချမ်းစာတွေ ဒီလောက်ဖတ်နေရင်တော့ အိုင်ကျူက မြင့်ပြီးသားနေမှာပါနော်.........ခိခိ ချူပ်စ် ချူစ်........
ဒါကတော့ ၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၁)ပါတဲ့ အမှန်ကတော့ အသေးစိတ်စကားကို ကပ်ပြောရရင် နံပါတ် (၁)က
၀ါသနာ ၃ ခုပေါင်းပါတဲ့လေနော်
ဘာများဖြစ်မလဲ မောင်ညီမလေးတို့ရယ် တွေးကြည့်ကြပါအုံးလေ......................နော်
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၂)ပါ
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၃)ပါ
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၄)ပါ
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၅)ပါ
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၆)ပါ ဒါလေးက ငယ်နုစဉ် က ပိုလုပ်ဖြစ်တဲ့ ၀ါသနာလေးပါ ခုတော့ အချိန်မရတာရယ် စိတ်မပါတာရယ်နဲ့မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့ ဒီပုံက CD ကာဗာပါ မဆလာမဟောင်းလေ ဂျယ်ရီ ဟော်လီဝယ်လ် ရဲ့ တကိုယ်တော်အခွေကာဗာဖြစ်ပါတယ် ရှိက်ဇိုဖော်နစ် ဆိုတဲ့အခွေပါ အစက အင်္ကျံပါတယ် တီက ဟိုစကားဘာတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ဖော်ရမယ့်နေရာတွေ ကိုဖော်ရတယ် အဲ ဖုံးရမယ့် နေရာတွေ ဆိုလဲ လှတာလေးတွေနဲ့ပဲဖုံးရတယ် ဆိုတာ သတိရလို့ ဖော်ပေးလိုက်တယ် အကိုကာလသားများအတွက်စ်..........
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၇)ပါ ခုနောက်ပိုင်းလွယ်လို့ တော်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၈)ပါ
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၉)ပါ ဒါလဲ နှစ်ခုပဲ တခု က နေ့တိုင်းလုပ်တယ် အမြဲလုပ်ဖြစ်တာပါ နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်း လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်လေ
၂၄-၇ ပေါ့နော် အဲ့လောက်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလောက်ကြိုက်တဲ့ ၀ါသနာပါနော်
နောက်တခု က တခါတခါ မှလုပ်ဖြစ်တယ်
၀ါသနာ အမှတ်စဉ် (၁၀)ပါ ဒါကလဲ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြိုကြားကြိုကြား တော်တော်လုပ်ဖြစ်တဲ့
Posted by တီချမ်း at 12:54 PM 17 comments: Links to this post
နန်းဆန်တဲ့ တူအရီး (သို့) ငပေါဂေဟာနှင့်အပြိုင်ပေါခြ...
ဖိုးစိန်ရှာတဲ့ ပြဿနာ (သို့) ကြောက်စရာတီတီချမ်း (သိ...
မွေးဖွားခြင်း(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
မာရသွန်(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ဆုတောင်း(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ကော်ဖီ(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ရသ(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ငါတို့ရဲ့ ဘိုင်အိုဂရုပ်ဖီ(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်း...
သပ်သပ်စီ(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
အချစ် တစ်ပတ်လည်(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ပြယုဂ်(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
စောယူရီဂဲလာ ရိုးမြူးလက် စမိ(သ်)ဒွန်း
အဖျားလား?(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
ပြီးဆုံးခြင်း(ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)